Shina Heshida kalitao fampiharana tsara indrindra amin'ny rindrina vita amin'ny hoso-doko amin'ny rindrina vita amin'ny rindrina Outer Meihe
Ilay kalitao Halavan'ny rindrina anatinyAmpiasao ny Formula iraisam-pirenena miovaova, izay tsy misy fandotoana ny tontolo iainana an-trano sy ivelany. Ny vokatra dia manana tanjaka manarona sy fametahana mafy, ary toy ny rano tsy mahazaka rano ihany koa, fanamafisana ny rano, ny fanoherana ny fanoherana sy ny alkali, ny fahombiazan'ny sarimihetsika ary maharitra ny asa fanompoana.
Azo ampiharina amin'ny fanamboarana sy fiarovana ny rindrina vita amin'ny konkretera, rindrina betonika, rafitry ny tranoben'ny fananganana isan-karazany, toy ny fanavaozana sy famaranana ireo trano taloha.
2. Ny fanoherana mahery vaika sy fenitra nasionaly ambony;
3. Ny fanoherana tsara sy ny fanoherana Alkali;
4. Herin'ny Super manafina;
5. Famonoana afo A2.
6. Ny fahefana manafina, ny fanoherana ny fanoherana;
7. Fiantohana rano tsara sy fahatoniana an'habakabaka.
Previous: Heshida Multifunction malaza ho an'ny rindrina ivelany anatiny
Manaraka: Heshida rindrina loko hoso-doko